साउदी अरेबियामा नयाँ नियमः दिउँसो १२ देखि ३ बजेसम्म घाममा काम गर्न नपाइने. – Sabaikoaawaj.com
साउदी अरेबियामा नयाँ नियमः दिउँसो १२ देखि ३ बजेसम्म घाममा काम गर्न नपाइने.
शनिबार, जेष्ठ २७, २०७४ 12:02:01 PM	मा प्रकाशित
२७, जेठ / साउदी अरेबियाले दिउँसोको समयमा खुला आकाशमुनि काम गर्न नपाउने नियम लागु गरेको छ । दिउँसोको समयमा घाम निकै चर्को लाग्ने र त्यसले कामदारको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै साउदी सरकारले दिउँसो १२ बजेदेखि ३ बजेसम्म खुला आकाशमुनि काम गर्न नपाउने नियम लागु गरेको हो ।
यो नियम यहि जुन १५ अर्थात आउँदो असार १ गतेदेखि लागु हुनेछ । साउदीको श्रम तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कामदारको सुरक्षालाई ध्यानमा राखि काम गर्ने स्थानमा हुने दुर्घनालाई न्युनिकरण गर्नका लागि यस्तो नियम ल्याइएको हो ।
यो नियमले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको सुरक्षाको प्रत्याभुत गर्ने साउदीका विदेश मन्त्रीले बताउनुभएको छ । मन्त्रालयले रोजगारदाता सबैलाई यो नियम अनिवार्य पालना गर्न आग्रह पनि गरेको छ । यो नियम सेम्टेम्बर १५ अर्थात आउँदो भदाै ३० गतेसम्म लागु हुनेछ ।
यो अवधिमा गर्मी धेरै हुने भएकाले यस्तो नियम ल्याइएको हो । भदौपछि पनि निजी क्षेत्रमा जोखिममा काम गरिरहेका कमदारको व्यक्तिगत र पेशागत सुरक्षालाई कायम राख्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित मितिः शनिबार, जेष्ठ २७, २०७४ 12:02:01 PM